Dainik Headlines - Page4of 490 - Nepali Khabar from Nepal
एकै दिनमा यसरी हटाउनुस् अनुहारको नचाहिएको रौं
February 27, 2019	Healthy Life 0
झट्ट हेर्दा सबैको आँखा पहिला अनुहारमा नै पर्न जान्छ । कसैको अनुहार चम्किलो रौं रहित हुन्छ भने कसैको अनाबश्यक रौं तथा झुसले शुन्दरतामा बाधक बनिरहेको हुन्छ । अनाबश्यक रौं एकै दिनमा हटाएर चम्किलो र सफा अनुहार पाउन यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ : सामग्री काँचो दूध,तर, बेसार,बेसन बिधि – एक चम्चा …
स्याउको वियाँका पनि यति धेरै फाइदा, थाहाँ पाउदा हुनुहुनेछ चकित
एजेन्सी । भनिन्छ, दैनिक रुपमा एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ गइरहनु पर्दैन । यो भनाईले पनि शरिर स्वस्थ राख्न स्याउको महिमा पुष्टि हुन्छ । स्याउ बोक्रा नफाली खाने फल भएपनि कतिपयले फालेको पाइन्छ । स्याउको बोक्रा र बियाँमा शरिरलाई चाहिने निकै आवश्यक तत्व रहेको हुन्छ। स्याउमा भिटामिन सी, भिटामिन इ र …
यी हुन् दुखाई कम गर्ने घरेलु उपाय
अदुवा । मांसपेशीको दुखाईका लागि अदुवामा गिंगेरोल्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले दुखाई गराउने हर्मोन उत्पादनलाई रोक्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दैनिक एक चम्चा सुकेको अदुवा वा दुई चम्चा काटेको अदुवा समावेश गर्नुपर्छ। ल्वाङ : दाँत दुखाईका लागि दाँत या गिजा दुखेको छ भने एउटा ल्वाङ चपाउँदा दुई घण्टामै निको हुन्छ। ल्वाङमा …
बिहान खाली पेटमा पिउनुहोस् एक गिलास मनतातो पानी, पाउनुहुनेछ आश्चर्यजनक फाइदा
एजेन्सी । पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी …
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन्, आजको राशिफल, १३ फाल्गुण २०७५, सोमवार सप्तमी,यी राशीलाई असाध्यै राम्रो यी राशीलाई ठिकै,पुरा बिबरण हेर्नुहोस
February 25, 2019	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): स्वास्थ्य कमजोर रहनाले चिताएको काम गर्न नसकिएला । जिम्मेवारी भने बढिरहने देखिन्छ । बाध्यताले अनावश्यक अलमल बढाउन सक्छ । सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाटै धोका पाइएला । व्यावसायिक काममा पनि खर्च बढ्नेछ । अरूका काममा श्रम तथा बुद्धि खर्चनुपर्ला । बृष (इ, …
आलुको बोक्रा नताछ्नुस, खेर जान्छ पौष्टिक तत्व
February 24, 2019	Healthy Life 0
हरेकको भान्सामा, हरेक छाक पाक्छ आलु । आलुको अनेक परिकार बन्छ । आलुलाई जसरी पनि खान सकिन्छ । उसिनेर खाए भयो । प|mाइ गरे भयो । अरु तरकारीसँग मिसाउन सकियो । अचार बनाएर खान सकियो । तरकारी, खाजा सबै रुपमा आलु उपयोगी हुन्छ । पाचन यन्त्रमा सुधार, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण, …
यी खानेकुरा जसलाई पकाउनु हानिकारक हुनसक्छ
खानेकुरा हामी किन खान्छौ ? सामान्यत यसको जबाफ हो, भोक मेट्न । खानाको सम्बन्ध भोकसँग मात्र छैन । खाना त्यस्तो स्रोत हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइडेट, फाइबर आदि आवश्यक हुन्छ । यी सबैको स्रोत खाना नै हो। त्यसैले खाना खानु भनेको …
टमाटरको फेस मास्कले ल्याउनेछ तपाईको अनुहारमा निखारता
टमाटरको प्रयोग राम्रो स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर मानिसको अनुहारलाई निखार्न पनि प्रयोग हुने गर्छ । टमाटरमा मानिसको अनुहारलाई निकै फाइदा दिने तत्वहरु हुन्छन् । यसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यसले सनस्क्रिनले जसरी अनुहारको हेरचाह गर्छ, त्यसरी नै गर्ने गर्छ । टमाटरमा भिटामिन ए, सीको मात्रा धेरै …
कब्जियत हुन्छ ? काँचो केरा खानुस्, अन्य ६ फाइदा
पाकेको केराको फाइदाका बारेमा जान्नुभएकै होला, तर के तपाईलाई काँचो केराको फाइदाका बारेमा थाहा छ ? यस्ता छन काँचो केराका फाइदाहरु : १. तौल घटाउँन सहयोग – तौल घटाउँन मन लागेकालाई दैनिक एक काचो केरा खाने सल्लाह दिइन्छ । यसरमा भरपूर मात्रामा पाइने फाइबरले अनावश्यक फ्याट सेल्स र फोहोरलाई सफा …
मेथीको पातदेखि दाना सबै स्वास्थ्यका लागि अमृत समान
विभिन्न स्वाथ्र्यवद्र्वक गुणहरुका कारण मेथीको साग अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । वारम्वार पिसाब लागिरहने समस्या छ भने मेथीको पातको रसले निकै फाइदा पुग्छ । दैनिक यसको सेवनबाट तपाइंको समस्या धेरैहदसम्म कम भएर जान्छ । धेरैजसो मानिसहरुलाई पेटसम्बन्धी समस्याले सताइरहेको हुन्छ। यसमा कब्जियत र ग्यास्ट्रिक प्रमुख छन् । मेथीको हरियो साग खाँदा …
Page4of 490« First...«23456	»	102030...Last »